Umhla My Pet » 7 Inyaniso Malunga Pet Lovers
Ukuba nesilwanyana ngokwenene ubomi ukutshintshwa. Yaye bonke abo abathanda pet phandle phaya, siyazi ukuba ungenza zingavumelaniyo ngokwenene kunye ngezantsi iinyaniso ezisixhenxe.
inyaniso #1: “Pet High”
Abanini Pet ngokubanzi nentembelo ngakumbi neziphumo self-esteem ephakamileyo. Izilwanyana umthande uxhomekeko, sibulisa ngovuyo, kwaye azalisekise imfuno yokwamkela, ngokudala “pet eliphezulu”, ekhaliphileyo umnini pet, uyazi ukuba imvakalelo ayinakho bamtyabula.
inyaniso #2: Okuninzi Positive Outlook on Life
Xa ucinga nezilwanyana zakho, awukwazi uncedo kodwa ndincume cinga zonke iindlela ethe wazisa uvuyo ebomini bakho. Naxa maxesha anzima, iiseshoni ubabonise lokudlala iyure-elide uzibone usuku lwakho. Enyanisweni xa ucinga ngesilo yakho, izicamango ezibi ndimke kwaye owakhayo bangumceph wonke umzimba wakho.
inyaniso #3: Lonely No More
Izilwanyana kwakhona zisinika iimvakalelo esekhaya kwaye asinike ubukho enentsingiselo. Uxanduva sizincame zobumnini pet ubalulekile konke xa sibona kwaye uzive kwemiqathango, intuthuzelo azigwebi zibonelela.
inyaniso #4: Vula Towards Life nolwalamano
The “pet eliphezulu” ukuba nezilwanyana zethu kusibonisa yenza ukuba sesichengeni awuyifumani njengoko ungakhululeki. Kuba siyazi ukuba, enoba kwenzeka ntoni, kukho into ephilayo ithembele kwethu. ngokusebenzisa izilwanyana’ nenkathalo nomsa, izilwanyana ukuxhomekeka oyinyaniso kusibonisa inika ithemba ukuba ukuvula up ixabisa ngokwenene umngcipheko lonke ixesha.
inyaniso #5: Ukukholelwa abatshatileyo Soul
Ngokusebenzisa ngokwanga random ukuba lengubo-ehleli kuloo inkangeleko lwentlonelo emehlweni abo, uthando olungenamiqathango izilwanyana zibonelela unika intsingiselo entsha iqabane elithi umphefumlo. Kubathandi pet kunye ababukeli, nezilwanyana zethu elinye amaqabane umphefumlo wethu. ngabo “nisazi nje” xa sifuna abanye ingqalelo ekhethekileyo siqinisekisa ukuba imiphefumlo yenu ukuthetha omnye komnye. Ke le ngcamango yokuba izilwanyana zethu kusenza sibe ovuleleke kanye na ukuba le nto yokuba amaqabane umphefumlo.
inyaniso #6: In Touch Iimvakalelo
ziimvakalelo, oko akuthethi Ityhwatyhwa nakukhala okanye rhoqo utshintsho kwimo. Izilwanyana kubomi bethu nentsingiselo enzulu ngokukuvumela ukuba banxibelelana othambileyo, iimvakalelo senithandana. thina, njengabanini pet, bakutshelwe nehlombe yaye akwazi ukuvakalisa ekuhleni iingcinga neemvakalelo zethu kuphela izilwanyana zethu kodwa abanye kwakunye.
inyaniso #7: Izilwanyana Kuqala
izilwanyana bethu nabantwana bethu. Ukususela soloko bethetha ngazo olusindisa amawaka imifanekiso isilwanyana sibaphatha abantwana, ubudlelwane phakathi kwethu kunye nezilo bethu ifana kakhulu naleyo umzali nomntwana.